Nhau - Chii chinonzi UPS?
Simba remagetsi risingapindiki kana sosi yemagetsi isingapindiki (UPS) chinhu chemagetsi chinopa simba rekukurumidzira kumutoro kana sosi yemagetsi kanamains simbaanokundikana.A UPS inowanzo shandiswa kuchengetedza Hardware sengemakombiyuta,data centers,telecommunicationmidziyo kana zvimwe midziyo yemagetsi uko kukanganisika kwesimba kusingatarisirwe kunogona kukonzera kukuvara, kuuraya, kukanganisa kwakanyanya kwebhizinesi kana kurasikirwa kwedata.
Ungasarudza sei aInokodzeraBhatiri reUPS System?
Kune marudzi matatu makuru emabhatiri eUPS pamusika: Valve Regulated Lead Acid (VRLA), akanyorova kana akazara-sero mabhatiri uye Lithium-ion mabhatiri.Aya mabhatiri ndiwo akanakisa marudzi ekuona simba risingapindike nekuti anoda kushomeka kwekugadzirisa, kupa kuchengetedzwa kwenguva refu kweanosvika makore makumi maviri kana kudhura zvishoma.Tisati tatenga bhatiri reUPS, ngatitarisei mabhenefiti aanopa.Mabhatiri eVRLA ane hupenyu hupfupi asi anoda kugadziridzwa kushoma.Wet-cell mabhatiri anogara kwenguva refu asi anoda kuchengetedzwa kwakawanda kazhinji.Nekudaro, mabhatiri eLi-ion ane hupenyu hurefu uye haadi kugadziriswa.Nenguva mabhatiri e-lithium-ion aratidza semutambo-shanduko yeUPS masisitimu.
Zvakanakira Lithium-ion Mabhatiri
Zvirinani PerformancepaTembiricha Yakasiyana
Hapana shanduko muhutano hwekuita kunyangwe mukupisa kwepamusoro kunotsanangura bhatiri rakanaka.Kuenzaniswa nemabhatiri eVRLA lithium-ion bhatiri rinogona kuramba tembiricha yakakwira.Mabhatiri eLi-ion ane simba rekupa kushanda kukuru kunyange kusvika ku104 degrees F. Ichi ndicho chikonzero mabhatiri e-lithium-ion ari kushandiswa munzvimbo dzakaoma dzinosanganisira indasitiri nezvimwe zvakawanda.
Hupenyu hwebhatiri re lithium-ion chinhu chikuru chekucherechedza.Li-ion mabhatiri anogona kuramba 3000 kusvika 5000 kuchaja/kuburitsa mitsara.mabhatiri aya anogona kumhanya kusvika kaviri kureba seaya echinyakare mabhatiri eVRLA, zvinoreva kuti, lithium-ion UPS bhatiri inogona kumhanya makore masere kusvika gumi, zvakatowanda, nepo bhatiri reVRLA rinongomhanya kwemakore matatu kusvika mashanu.Inochengetedza mutengo wekugadzirisa uye inoderedza njodzi yekudzikira nekuti iyo UPS system inogona kugara makore mapfumbamwe kusvika gumi, zvinoreva kuti hapana chikonzero chekutsiva bhatiri.
Kana zvasvika pakupa simba rekuchengetedza rakatsetseka kumidziyo, UPS inoda kubhadharwa nekukurumidza kusvika kuzere.Bhatiri relithium-ion rakavimbika rinotora nguva shoma pane mabhatiri eVRLA.Bhatiri reVRLA rinotora kanenge maawa gumi nemaviri kubhadharwa kubva ku0% kusvika ku90%, kune rumwe rutivi, zvinongotora maawa maviri kusvika ku4 kuti lithiamu-ion bhatiri izere zvakakwana, izvo zvinoderedza ngozi yekutambura kumwe kubuda.
Mabhatiri eLithium-ion i40% madiki uye anoreruka 40% kusvika 60% akareruka kupfuura mabhatiri eVRLA kuitira kuti agone kuiswa chero kupi.Lithium-ion UPS inoita kuti makambani awane nguva yakawanda yekumhanya munzvimbo imwechete kana kushoma kwenzvimbo.
Li-ion mabhatiri ane yakasanganiswa bhatiri manejimendi system kuchengetedza masero ebhatiri kubva kune nyaya dzakadai, pamusoro kana undercharging, kupisa kwakanyanya, ikozvino, etc. Inopawo huwandu hwekuita nekuwedzera hupenyu hwebhatiri.
Yakaderera Yese Mutengo Wevaridzi
Lithium-ion mabhatiri anochengetedza 50% yemutengo wakazara wemuridzi pane mamwe mabhatiri nekukwanisa kwawo kuramba akawanda kuchaja / kuburitsa mabhatiri, hupenyu hurefu, kuderedza kugadzirisa, kuchinjika, diki saizi inochengetedza mutengo wekuisa, uye kushingirira tembiricha yakakwira.
Yakatangwa muna 2008, Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. ibhizimusi repamusoro-soro rinobatanidza tsvagiridzo, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yezvigadzirwa zvesimba zvitsva.Zvigadzirwa zvikuru zvekambani iyi lithium-ion bhatiri cathode zvinhu, lithium-ion mabhatiri nemabhatiri packs, bhatiri manejimendi masisitimu, super-capacitor, etc. Semapiyona mukugadzira nekugadzira mabhatiri eLithium epamusoro eUPS uye mamwe maapplication, ese edu UPS. mabhatiri ane ichangoburwa simba manejimendi software.isu tinotenda mukupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nerutsigiro rwehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi uye basa risingaenzaniswi revatengi.Shanyira webhusaiti yedu yepamutemo kuti uone yakanakisa bhatiri backup inokodzera zvaunoda.